Xildhibaan Aadan Barre: Ma aqbaleyno in Soomaalidu ku ilmeeyaan Kenya – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nairobi – Mareeg.com: Xildhibaan Aadan Barre Ducaale oo ah guddoomiyaha isbaheysiga aqlabiyadda ku dhex leh baarlamaanka Kenya ayaa shalay sheegay in aanay jiri doonin dad qaxooti ah oo si khasab ah looga rarayo magaalooyinka dalka Kenya.
Wuxuu xusay inay dowladda Kenya saxiixday iyadoon la khasbin heshiiskii Vienna, sidoo kalena ay dhowaan heshiis saddex-geesood ah oo arrimaha qaxootiga ku saabsan la saxiixatay dowladda Soomaaliya iyo hay’adda UNHCR, kaas oo dhigayay in dib u celinta qaxootiga aysan ku imaan si khasab ah.
Xildhibaanka oo ka hadlay kulan ammaanka xaafadda Islii looga hadlayay oo ay ka qeyb galeen madaxda Soomaalida ee ku jirta dowladda Kenya, saraakiisha ammaanka iyo guddiga ganacsatada ayaa caddeeyay in inta ay xilka hayaan aysan oggolaan doonin in lagu xadgudbto dadka Soomaalida ah.
Kulanka ayaa shacabka loogu soo jeediyay inay la shaqeeyaan hay’adaha ammaanka, iyadoo ay mas’uuliyiintu caddeeyeen inay dowladda Kenya ballan-qaadday inay joojin doonto cadaadiska lagu hayo dadka rayidka ah.
“Waxaan u taagannahay danaha dadkeenna. Mana jirto cid ay taasi shaki uga jirto,” ayuu yiri xildhibaan Aadan Barre oo intaas ku daray, in booliiska dalka Kenya ay inta badan bartilmaameed ka dhigtaan muslimiinta isagoo yiri: “Innaga waxaa ina doortay doortay muslimiinta, waana difaacaynaa danahooda.”
Xildhibaanka oo hadalladiisu ay u ekaayeen kuwo ay caro ka buuxdo ayaa intaas ku daray: “Innagu marba ma ogolaanayno in shacabka Soomaaliyeed dadka si gooni ah loo faruuqo, oo ay ilmeeyeen gudaha Kenya.”
Sidoo kale, xildhibaan Bilow Keeroow oo laga soo doorto magaalada Mandheera oo isna goobta ka hadlay ayaa xukuumadda Kenya ku eedeeyay in habka ay dagaalka ula galayso argagaxisada uu yahay mid dhallinyarada ku dhiirigelinaya inay ka mid noqdaan kooxahaas.
“Arrintu ma ahan Muslim inay dhibka wadaan, balse sida ay dowladda u dhaqmayso ayaaba ah fal argagaxiso. Sheekh Makaburi waxaa lagu calaamadeeyay inuu ka mid yahay argagaxisada, muddo yar kaddibna waa la dilay, xukuumadduna waxay tiri ma garanayno cidda falkaas geysatay,” ayuu yiri xildhibaan Keerow.
Xidhibaanadu waxay ku eedeeyeen saraakiisha booliiska Pangani inay haweenka kufsadaan iyo inay dadka lacago ka qaataan si ay u sii daayaan, iyadoo xildhibaan Aadan Barre uu intii uu kulanku socday soo saaray warqad dad Soomaaliyeed looga qaaday 5,000 oo lacagta Kenya ah si loo sii daayo.
“Warqaddan waxaan u geynayaa madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, si aan u tuso in saraakiisha booliiska Pangani ay sharafta Kenya ku dheeleen dhacna u geystaan shacabka Soomaaliyeed ee Islii ku nool,” ayuu yiri xildhibaan Ducaale.
Mudanaha ayaa intaas ku daray in madaxweynaha ay weydiisan doonaan in taliye looga dhigo saldhigga booliiska Pangani nin Muslim ah oo qofkii dambi leh dambiga ku qadaya, kii aan lahaynna aan dhibaateynayn.
Soomaalida ku dhaqan xaafadda Islii ee magaalada Nairobi ayaa marka falal amaan darro dhacaan waxaa booliska Kenya kula kacaan raaf, iyagoo markaas kadibna ka uruursada lacag laaluush ah si loo sii daayo.